श्रीमतीलाई प्रतिनिधि सभा समानुपातिक उम्मेदवार बनाए पछि एमालेकै असन्तुष्टहरुकाे असहयोगले बामदेव पराजित ! – MeroJilla.com
श्रीमतीलाई प्रतिनिधि सभा समानुपातिक उम्मेदवार बनाए पछि एमालेकै असन्तुष्टहरुकाे असहयोगले बामदेव पराजित !
बर्दिया, २४ मंसिर । ।
वामगठबन्धका अर्का सुत्रधार वामदेव गौतम पराजित भएका छन्। बामदेव निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्‍मेदवार संजय गौतमसँग ७ सय ७५ मत अन्तरले पराजित भएका हुन्।
सुरुमा अग्रता लिएका एमाले उपाध्यक्ष गौतम सविक बर्दिया २ बाट सोचे अनुरुप मत नआउँदा पराजित भए।
निर्वाचनका बखत मन्त्री गौतमले एमाले उपाध्यक्ष गौतमलाई २०७०मा निर्वाचित पछि बर्दिया छोडेको, विगत २५ बर्ष देखि पटक पटक जितेर मन्त्री बन्दा खासै काम नगरेको र राजनीतिमा परिवारबाद स्थापित गर्न खोजेको भन्दै चुनावी सभाहरुमा प्रहार गर्ने गरेका थिए।
उपाध्यक्ष गौतमले श्रीमतीलाई प्रतिनिधि सभा समानुपातिक उम्मेदवार बनाए पछि एमालेकै असन्तुष्टहरुले सहयोग गर्दा सिचाइ मन्त्री गौतमको जित सहज भएको हो।
सिचाइ मन्त्री गौतमले जितपछि फेसबुक मार्फत बर्दियाली जनतालाई निर्वाचित गराएको धन्यवाद दिएका छन्। उनले लेखेका छन् , तपाईहरुले म प्रतिगरेको बिश्वासलाई सिरोउपर मानेर अझ बढी जिम्मेवारी भई देश र जनता प्रती समर्पित हुनेछु।